Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး)
Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ကဘာလဲ။
Generic Name: Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Coversyl (Perindopril) သည် ACEI အုပ်စုဝင် ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး သွေးတိုးခြင်းနှင့် နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောရောဂါကို ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းဆေးကို နှလုံးရောင်ပြီး အလုပ်မလုပ်သည့်ရောဂါ ကုသရန်လည်း အသုံးပြုသည်။ ဆီးချိုကြောင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည်။
Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။ တနေ့လျှင် တကြိမ် (သို့) ၂ကြိမ် သောက်နိုင်သည်။ မှတ်မိလွယ်ရန် နေ့စဉ် တူညီသောအချိန်တွင် သောက်ပါ။ နေထိုင်ကောင်းနေစဉ်မှာပင် ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း သောက်သင့်ပါသည်။
ဆေးဘူးတွင်ပါဝင်သော အညွှန်းစာများကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Coversyl (Perindopril) ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့ရန်၊ မစိုစွတ်မှုမရှိစေရန် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်စေရန် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Coversyl (Perindopril) ဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသည့် ပုံစံကွဲပြား ခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဘူးအခွံတွင် ပါသည့် သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Coversyl (Perindopril) ကို အိမ်သာတွင်း ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းကို မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့လျှင်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားလျှင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ ဆေးဝါးများအား စနစ်တကျ မည်သို့ စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုသည်ကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် သောက်သုံးရန် စိတ်မချရပါ။ ၎င်းဆေးသည် ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ မိခင်နို့ထဲသို့ perindopril ရောက်နိုင် မရောက်နိုင်ကို မသိရသေးပါ။ နို့တိုက်ကျွေးခြင်းမပြုမီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သို့ Coversyl (Perindopril) တွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိပါသည် အများစုမှာ မဖြစ်ပွားတတ်ပါ။ နောက်ဆက်တွဲကုသခြင်းများ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ဆေးသောက်ပြီး ပြသနာတစုံတရာရှိပါက သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
• ဖျားနာခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓါနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
အကယ်၍ သွေးတွင်းရှိ ပိုတက်စီယမ်ဓါတ် မြင့်တက်နိုင်သော ဆိုးရွားသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ- ကြွက်သားများ အားနည်းသွားခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း) ကြုံရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြဖြစ်အောင်ပြပါ။
(ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Coversyl (Perindopril) သည် သင်ယခု သောက်သုံးနေသည့် တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသည့် ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် သို့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ အောက်ပါဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
• ဆီးဆေးများ (amiloride၊ spironolactone၊ triamterene ကဲ့သို့)
• စတီးရွိုက်မပါသော အရောင်ကျဆေးများ (ဥပမာ-aspirin, diclofenac, ibuprofen, indomethacin, naproxen)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Coversyl (Perindopril) သည် အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်မလာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Coversyl (Perindopril) သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနျေနှင့် ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်နိုင်ကာ ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အောက်ပါရောဂါများရှိလျှင် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
• ACEI နှင့် ပတ်သက်သော သွေးကြောများဖောရောင်ခြင်း
• သွေးတွင်း ပိုတက်စီယမ်ဓါတ်မြင့်တက်ခြင်း
• ကျောက်ကပ်၊ အသည်းရောဂါများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
• Coversyl (Perindopril) နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
• လူကြီးများ။ တနေ့လျှင် တကြိမ် ၄မီလီဂရမ်မှ စသောက်နိုင်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏကို လိုအပ်သလို ချိန်ဆပေးနိုင်သည်။ အများဆုံပမာဏသည် ၁၆မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
• အသက် ၆၀အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ။ တနေ့လျှင် ၄မီလီဂရမ်မှ စတင်ပြီး တစ်ကြိမ်တည်း (သို့) ၂ကြိမ်ခွဲသောက်နိုင်သည်။ သင်၏ ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏကို လိုအပ်သလို ချိန်ဆပေးနိုင်သည်။ အများဆုံးပမာဏသည် ၈မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
• လူကြီးများ။ တနေ့လျှင် တကြိမ် ၄မီလီဂရမ်မှ စသောက်နိုင်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏကို ခံနိုင်ရည်ပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သလို ချိန်ဆပေးနိုင်သည်။ အများဆုံပမာဏသည် ၈မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Perindopril (ပယ်ရင်ဒိုပရေး) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Coversyl (Perindopril) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂မီလီဂရမ်၊ ၄မီလီဂရမ်၊ ၅မီလီဂရမ်၊ ၈မီလီဂရမ် နှင့် ၁၀မီလီဂရမ် ဆေးပြားများ
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားသည့် အခြေအနေတွင် အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ)
Coversyl (Perindopril) ဆေးကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့လျှင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံး သောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုလျှင် လွတ်သွားသည့်အကြိမ်ကို ကျော်၍ ပုံမှန်အချိန်တွင်သာ သောက်သုံးပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။
Perindopril https://www.drugs.com/uk/perindopril-4mg- tablets-spc- 10615.html. Accessed July 14, 2016.
Perindopril http://patient.info/medicine/perindopril-an- ace-inhibitor. Accessed July 14, 2016.
Perindopril http://www.healthline.com/drugs/perindopril/oral-tablet#Highlights1. Accessed July 14, 2016.